फेरि ए.क्कासी ओलीसँग किन यसरी रि´साए बामदेव ? लगाए यस्तो ग’म्भीर आ’रोप, अब के गर्लान ओली ?::Point Nepal
फेरि एक्का´सी ओलीसँग किन यसरी रि´साए बामदेव ? लगाए यस्तो ग’म्भीर आ’रोप, अब के ग´´र्लान ओली ?
काठमाडौ : स´त्तारुढ दल नेपाल क´म्युनिष्ट पार्टी ने´कपा भि´त्रको वि´वाद च’र्किदैँ गएको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम प्रधानमन्त्री ए´वम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बि´च्किएका छन् ।
उनी अध्यक्ष ओलीसँग निकै रु´बष्ट बनेको स्रोतको भनाई छ ।
ने´कपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र व´रिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच ओलीको वि´पक्षमा मो’र्चाब´न्दी बनाएर जाने सहमति भएको बुझिएको छ । प्रचण्ड र नेपाललाई पार्टी उपाध्यक्ष वाम´देव गौतमले पनि सा´थ दिने भएका छन् ।
स्रोतका अनुसार गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीको साथ छा´डेका छन् । प्रचण्ड र ओलीबीच टक´राव आउँदा गौतमले अन्तिम समयमा ओलीलाई साथ दिएका थिए । गौ´तमकै म´ध्यमार्गी लाइनका कारण ओलीको कुर्सी जो´गिएको थियो ।
आफ्नो कुर्सी जो´गिएपछि ओली गौतमको नि´वास भैं´सेपाटी गएर आफूले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए । केही समयपछि ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य म´नोनीत गर्ने नि´र्णय गरे । तर, गौतमको सांसद पद खारेज गर्न भन्दै सर्वोच्च अ´दालतमा मु’द्दा दा’यर गरियो ।
उनलाई मन्त्रीसमेत बनाउन लागेको हल्लापछि उनीवि’रुद्ध मु’द्दा दायर भएको हो । जुन अहिले सं´वैधानिक इ´जालसमा सुनु´वाइ भइरहेको छ । आफूविरु’द्ध मु’द्दा हाल्न उक्साउनेमा ओली गु´टकै नेताहरूले खे´ल खेलेको गौतमले ग´म्भीर आ’रोप लगाएका छन् ।
नेकपाभि´त्र देखिएको वि´वादले पुनः स´मीकरण फे´रबदल भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली एकलौटी ढं´गले हिँ´ड्ने छाँ´टकाँट देखाएपछि नेताहरूबीच समी´करण फे´रबदल भएको हो ।
यस्तै यता स´त्तारुढ दल नेपाल क´म्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतीय गुप्त’चर संस्था रअका प्रमुखलाई नभटेको सचिवालयले स्प´ष्टिकरण दिएको छ ।
प्रचण्डको सचिवालयले प्रेस वि´ज्ञप्ति जारि गरि भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ ९रअ०का प्रमुख सा´मन्तकुमार गोयलले प्रचण्डसँग भेट गरे भनेर आएको समचारमा स´त्य नभएको जनाएको हो ।
प्रचण्डका प्रेस सं´योजक विष्णु सा´पकोटाले जारि गरेको वि´ज्ञप्तिमा केही अनलाइनमा आएका समाचारले भ्रम छरेको जनाउँदै उक्त समाचारप्रति ग’म्भिर ध्याना’कर्शण भएको जनाएका छन् ।
प्रचण्डबारे केही अनलाइन मिडियामा ‘प्रचण्ड र माधव नेपालसँग रअका प्रमुख गोयलको गोप्य भेट, बिहीबार मात्रै दिल्ली फर्कने’ शीर्षकमा प्र´काशित समाचारप्र´ति ग´म्भीर ध्या´नाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
यस्तै जु´गलले सं´वेदनशील विषयमा झु´ट, क´पोलकल्पित र भ्रा’मक समाचारप्र´ति खेद प्र´कट गर्दै आ´म जनस´मुदाय तथा सञ्चा´र ज´गतलाई भ्र´ममा नपर्न अ´पील स´मेत गरेका छन् ।